फ्लक्स: कुन उत्पादनलाई वेल्डिंगमा प्रयोग गरिन्छ? | नि: शुल्क हार्डवेयर
फ्लक्स: कुन उत्पादनलाई वेल्डिंगमा प्रयोग गरिन्छ?
यदि तपाइँ माइक्रो-वेल्ड कसरी सिक्दै हुनुहुन्छ भने इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू, वा रेबलि forको लागि, निश्चित रूपमा तपाईंले प्रमाणित गर्नुभयो कि तपाईंलाई आवश्यक छ एउटा पेस्ट जसलाई फ्लक्स भनिन्छ। यो उत्पादन धेरैको लागि पूर्ण अपरिचित छ, किनकि टिनको साथ सामान्य सोल्डरिंगको लागि यस तत्वलाई सामान्यतया प्रयोग गरिदैन, अर्कोतर्फ, ती अन्य सोल्डरहरूको लागि यो ठूलो मद्दतको छ।
यो मा गाईड तपाईले जान्नु पर्ने सबै कुरा जान्न सक्नुहुन्छ यस पेस्टको बारेमा, जस्तै यसको संरचना, उद्देश्य, यसलाई कसरी लागू गर्ने, प्रकारहरू, इत्यादि।
1 फ्लक्स भनेको के हो?
1.1 फ्लक्स अनुप्रयोगहरू
1.2 फ्लक्सका प्रकारहरू
1.3 फ्लक्स र सोल्डर पेस्ट बीच भिन्नता
2 कसरी फ्लक्स प्रयोग गर्ने
2.1 कसरी फ्लक्स स्टोर गर्ने
2.2 फ्लक्सको उपयोगको लागि हानि र सावधानीहरू
3 फ्लक्स कहाँ किन्ने?
फ्लक्स भनेको के हो?
अंग्रेजी शब्द फ्लक्स लाई फ्लक्सको रूपमा अनुवाद गर्न सकिन्छ, र ल्याटिनबाट आउँदछ «फ्लक्सस» जसको अर्थ «प्रवाह»। यो इलेक्ट्रोनिक्सको लागि सोल्डरिंगमा मात्र प्रयोग हुँदैन, यो फ्लो एजेन्ट वा प्युरिफिंग एजेन्टको रूपमा धेरै प्रकारका सोल्डरिंगमा पनि प्रयोग हुन्छ, साथै धातुको उद्योगमा धातु उत्पादनमा पनि हो, कि तिनीहरूसँग प्राय: एक भन्दा बढी प्रकार्यहरू हुन्छन्।
पहिलो फ्लक्सहरू तिनीहरू नीबू, पोटाश, सोडियम कार्बोनेट, बोरेक्स, सिड सल्फेट, कोक, आदिले बनेका थिए। ती सबै धातुहरू शुद्ध पार्न फाउन्ड्रीहरूमा प्रयोग गरियो। यसको सट्टा, सफाई एजेन्टको रूपमा वा वेल्डिंग फ्लक्सहरू सुविधाजनक बनाउन, राम्रो गुणस्तरको वेल्ड उत्पादन गर्न र अक्सीकरण हटाउन, यो पछि प्रयोग गर्न थाल्नेछ।
ध्यान केन्द्रित गर्दै वेल्डर, जुन विषयले हामीलाई यहाँ रुचि राख्छ, यो मूलत: एक तत्व (टाँस्ने, तरल वा पाउडर) हो जो जोर्नीहरूको जंगलाई रोक्न सक्दछ, हावाको सम्पर्कबाट इन्सुलेटरको रूपमा कार्य गर्दछ जब फ्यूजन हुन्छ। यसका लागि रासायनिक मिश्रणहरू जस्तै फ्लोराइडहरू, बोरेटहरू, बोराक्स वा बोरिक एसिड प्रयोग गरिन्छ।
यस सुरक्षात्मक प्रभावको साथसाथै टिन सोल्डरहरूमा पनि यसले बनाउँछ सजिलो प्रक्रिया, धातु प्राप्त गर्दै र यसलाई अधिक व्यवस्थित बनाउँदै, जब घटकहरू राम्रोसँग पालन गर्दछन्। र, अवश्य पनि, यसले वेल्डिंगको गुणस्तर सुधार गर्दछ, प्रक्रियाको बखत फोहोर र मलबेसाहरूलाई वेवास्ता गर्दै।
यस प्रवाहको अर्को प्रभाव लाई मन पराउनु हो कम तापमान वेल्ड। प्रक्रियाको बखत तापमानको साथ भेल्डेड कम्पोनेन्ट्सलाई क्षतिको सम्भावना कम हुन्छ।
को लागी अनुप्रयोग फ्लक्स, प्राय: इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको सोल्डरिंगमा धेरै प्रयोग हुन्छ:
माइक्रो-वेल्ड मर्मत, जहाँ कम्पोनेन्ट सानो आकारको कारण अगाडि बढ्न यो अधिक जटिल छ।
पीसीबीहरूमा एसएमडी सोल्डरि।
BGA का लागि रिबलिing।
अवशेष वा जंग अवशेषहरूको सफाई।
त्यहाँ धेरै छन् फ्लक्स को प्रकारहरु वेल्डिंगको लागि बजारमा, प्रत्येक बिभिन्न मूल्य र सुविधाहरूको साथ।
भारी धातु बिना अमोनियम ब्रोमाइड: यो जैविक अमोनियम ब्रोमाइड्सको नि: शुल्क हाइड्रोब्रोमिक एसिडको जलीय समाधान हो। तिनीहरूले प्राय: वेल्डमा अवशेषको ट्रेस छोड्दैनन्, र यदि ती गरेमा यसले प्वालहरू (पिटिting) को गठन गर्न सक्दैन।
जिंक क्लोराइड: फ्रि हाइड्रोक्लोरिक एसिडको साथ अमोनियम क्लोराइड र जिंक क्लोराइडको अर्को जलीय समाधान। यो यसको प्रयोग र प्रभावकारिताको लागि बाहिर खडा छ, जबकि अवशेष हटाउने हो भने यसलाई प्वाल पार्नु हो।
जस्ता ब्रोमाइड: जस्ता ब्रोमाइड र फ्रि हाइड्रोक्लोरिक एसिडको साथ अमोनियम ब्रोमाइडको अर्को प्रकारको तरल समाधान। अघिल्लो जस्तो, यो प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ, तर यसलाई पानीले धोएर बाँकी रहेको अवशेष हटाउन पनि सजिलो छ। जे होस् अवशेष मिलापमा रहन्छ भने, यसले प्वालहरू बनाउँदैन।
केसरो: जहाँसम्म सिफारिस गरिएको छैन, केही निर्माताहरूले आफ्नै घरमा बनाइएको फ्लक्स सिर्जना गर्ने प्रयोग गर्छन्। यो गर्न, तिनीहरूले पिचको थोरै प्रयोग गर्छन् जुन उनीहरू पिच्छन् र मदिरासँग मिसाउँछन्। यद्यपि यस प्रकारको फ्लक्सले व्यावसायिक उत्पादनहरूको जस्तै परिणामहरू प्राप्त गर्दैन।
फ्लक्स र सोल्डर पेस्ट बीच भिन्नता
अक्सर शंकाको एक हो यदि यो सोल्डर पेस्ट जस्तै फ्लक्स हो वा यदि त्यहाँ केही भिन्नताहरू छन् भने। सत्य यो हो कि यो जटिल छ, र धेरै चोटि उत्पादनहरू उनीहरूको वर्णनमा दुविधा हुन्, दुबै पद समानार्थीको रूपमा प्रयोग गर्दै। केही भेदभाव गर्छन्, र दाबी गर्छन् कि त्यहाँ मात्र छ हल्का फरक:
प्रवाह: रासायनिक पदार्थ धातुहरूमा लागू गरियो ताकि तिनीहरू एकै प्रकारको तापले वेल्डको गुणस्तर सुधार गर्न सकुन्, वा डेलिडरिंगको लागि पनि।
सोल्डर पेस्ट: वेल्डिंग को लागी सबैभन्दा कठिन धातु भागहरु लाई पनी सहजीकरण को लागी प्रयोग गरीन्छ।
तर, मैले टिप्पणी गरे झै व्यावहारिक उद्देश्यका लागि तपाईले यसलाई लिन सक्नुहुन्छ पर्यायवाची। वास्तवमा, केहि क्षेत्रमा एक शब्द प्रयोग भएको छ भने अर्कोमा अर्को शब्द। केवल यो निश्चित गर्नुहोस् जब तपाईं उत्पादन किन्नुहुन्छ कि यो फ्लक्स वा टाँसको लागि वा अन्य अनुप्रयोगहरूको लागि टाँसेको छैन, र यो इलेक्ट्रोनिक्सको लागि विशिष्ट छ ...
कसरी फ्लक्स प्रयोग गर्ने
यदि तपाईं अनुसरण गर्नुहुन्छ भने फ्लक्स, वा फ्लक्सको प्रयोग सरल छ चरणहरूको एक श्रृंखला। यो गरेर, तपाईं यस उत्पादनको राम्रो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। थप रूपमा, तपाईले सावधानीका श्रृ series्खलाहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ, जस्तै यो हावा आवतजावत कोठामा प्रयोग गर्नु जस्तै यो एक रसायन हो जसले बाफहरू उत्पन्न गर्न सक्दछ, चश्मा लगाएर र मास्क लगाउँदछ, साथ साथै ग्लोभ्स पनि।
को निर्देशनहरू वेल्डिंग को लागी फ्लक्स को उपयोग गर्न को लागी:
वेल्डिंग क्षेत्रमा हुन सक्ने कुनै पनि फोहोर सफा गर्नुहोस्, यदि त्यहाँ एक छ भने।
क्षेत्र वा दुबैमा फ्लक्सको पातलो तह लागू गर्नुहोस्। फरक पर्दैन कि भागहरू भरिएका छन् जहाँ वा त्यहाँ वेल्डिंग हुनेछ। साथै, यदि क्षेत्र केही तातो छ, राम्रो छ।
त्यसपछि वेल्डिंग बाहिर गरिन्छ जब यो सामान्यतया गरिने छ, यो एक एसएमडी वेल्डिंग, रिबलिing, इत्यादिमा निर्भर गर्दै।
अन्तमा, फ्लक्स अवशेषहरू सफा गर्नुहोस्।
यो अन्तिम बिन्दुको बारेमा, त्यहाँ छ सफा गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा विवाद। वास्तवमा, यो शौक (वा म्यानुअल वेल्डिंग) को लागी श a्का मात्र होईन, यो उद्योगमा पनि एक शंका हो (स्वचालित वेल्डिंग)। धेरै उत्पादकहरूले उत्पादनको पछिको अंशलाई उपेक्षा गर्छन् यसको लागि स्वचालित उपकरणहरू नभएको र पर्याप्त सफाईको साथ जोड़हरू उत्पन्न गर्न प्रयोग गरिएको मेसिनरीको दक्षतामा भर पर्दै।
यसको सट्टामा, सुरक्षाको यो गलत भावनाले उपेक्षा गर्न सक्छ इलेक्ट्रोकेमिकल संक्रमण केहि कम्पोनेन्टमा उत्पन्न हुन्छ र त्यसले स्पष्टतः नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न गर्दैन, यद्यपि यसले लामो अवधिको असफलता समाप्त गर्दछ।
जब यो प्रयोग भइरहेको छ फ्लक्स कोर सोल्डर तार वा फ्लक्स, यो फ्लक्स सामान्यतया एक ठोस राल हो जुन यसको वरिपरिको धातु भन्दा उच्च पग्लिन बिन्दुको साथ हुन्छ। यस प्रकारको वेल्डमा, जब वेल्डरको टिपले तार छुन्छ, फ्लक्स तरल हुन्छ र वर्कपीसमा फैलिन्छ। यस तरिकाले, पग्लिएको धातुले ताप र फ्लक्सको अनुसरण गर्दछ, बन्धनको गठन गर्दछ। जसरी घटाउन सकिन्छ, किनकि यसलाई तातो पग्लिन आवश्यक छ, दूषित हुने जोखिमहरू धेरै कम छन् ...
अर्कोतर्फ, यो अन्य सोल्डरिंग प्रक्रियाहरूमा त्यस्तो हुँदैन जहाँ एसएमडी जस्ता सोल्डरका सुविधाहरूका कारण धेरै फ्ल्याक्स लागू हुन्छ। यद्यपि त्यहाँ उत्पादनहरू छन् "सफा छैन" तरलहरू यसलाई सफाईको आवश्यकता पर्दैन, तर तिनीहरूलाई आक्रिय प्रदान गर्न तापको तापमा पर्न आवश्यक पर्दछ।
त्यहाँ बिभिन्न कुल्ला वा सफाई उत्पादनहरू छन्, जस्तो कि सॉल्भन्ट्स जस्तो कि isopropyl अल्कोहल (IPA), साथै पोंछ, swabs, आदि। तपाईंले सही तरीकाले निर्धारण गर्नका लागि फ्लक्स निर्माताका निर्देशनहरू प्रयोगको लागि सिफारिस र ध्यानपूर्वक पढ्नुपर्दछ।
उदाहरण को लागी, पूर्ण वेभ सोल्डरिंग गर्ने क्रममा यो ग्यारेन्टी हुन्छ, तर अन्य टेकनीकमा छैन जहाँ सेलेक्टि point पोइन्ट-टू-पोइन्ट सोल्डरिंग वा पुनःबलिंग प्रयोग गरिन्छ। ती अवस्थाहरूमा, स्थानीय तातो ताप पर्याप्त हुँदैन ट्रिगर ब्रेक गर्नुहोस् रसायनको र यसलाई आक्रिय बनाउनुहोस्। र त्यो समस्या वेल्ड जोन बाहिर वा कम्पोनेन्ट वा अन्तर्गत फैलिएको बाहिरका लागि हो।
कसरी फ्लक्स स्टोर गर्ने
एकचोटि तपाईंले फ्लक्सको प्रयोग समाप्त गर्नुभयो भने, ताकि यो राम्रोसँग सुरक्षित गरियो तपाईंले:
यसको मूल बोतलमा फ्लक्स छोड्नुहोस् र राम्रोसँग बन्द गर्नुहोस्।
कन्टेनर सँधै ठाडो हुनै पर्छ, उल्टो भण्डारण नगर्ने।
चिसो ठाउँमा राख्नुहोस्, कम तापक्रम, राम्रो। यसलाई सुख्खा ठाउँमा वा उच्च तापक्रममा छोड्दा सबै मूल्यहरूमा टाढा रहनु पर्छ।
यदि तपाईंले यसलाई कम तापक्रम (º-º )C) मा भण्डार गर्नुभएको छ भने केही निर्माताहरूले सल्लाह दिनुभए पछि फेरि प्रयोग गर्नु अघि तपाईंले यसलाई कोठाको तापक्रममा5घण्टासम्म राख्नुपर्दछ ताकि यो प्रयोगको लागि अधिकतम तापमानमा पुग्न सक्दछ।
फ्लक्सको उपयोगको लागि हानि र सावधानीहरू
फ्लक्स वा फ्लक्स निःशुल्क छैन असुविधायद्यपि तिनीहरूको फाईदाले उनीहरूलाई प्रयोग गर्न लायक बनाउँदछ। उदाहरणका लागि, केमिकलहरू प्राय: केही हदसम्म आक्रामक हुन्छन् र तत्वहरूमा क्षय हुन्छन्। अरूले कम्पोनेन्टहरूसँग केहि हस्तक्षेप उत्पन्न गर्न सक्छन्, केही हदसम्म इन्सुलेट।
यो पनि हुन सक्छ संदूषण संवेदनशील भागहरू, जस्तै केहि अप्टिकल दृश्यहरू, लेजर डायोड पहलुहरू, MEMS संयन्त्र, स्विचहरू, आदि। अर्को समस्या यो छ कि पानीमा घुलनशील फ्लक्सहरूमा केही केमिकलहरू, जस्तै पोलीथिलीन ग्लाइकोल, मुद्रित सर्किटको तहहरूको डाइलेक्ट्रिक गुण बिगार्न निम्त्याउँछन्।
उच्च फ्रिक्वेन्सी सर्किटमा, फ्लक्सको अवशेषहरूले पनि केही समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। यो फेला परेको छ कि केहि केसहरुमा यसले जडानको इलेक्ट्रोमिग्रेशन र गठन गर्न सक्छ फुसफुस ionic अवशेषहरू द्वारा, सतह नमी तिनीहरूले कारण र पूर्वाग्रह भोल्टेज।
मैले यी रसायनहरू प्रयोग गर्नु अघि सुरक्षाको बारेमा चेतावनी गर्नु अघि र त्यो अस्थिर जैविक यौगिकहरू पनि हुनसक्दछ प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव। सफा गर्न आवश्यक सॉल्भन्टहरू हानिकारक पनि हुन्छन्, जसले वातावरणीय प्रभाव पनि पार्दछ।
म दोहोर्याउँछु कि यो महत्त्वपूर्ण छ गग्गल, मास्क र ग्लोभज लगाउनुहोस् ह्यान्डलिंगका लागि। त्यसो गर्न असफल भएमा स्वास्थ्य समस्याहरू हुन सक्दछ लामो समय सम्म जोखिमबाट, उदाहरणका लागि, रसिन फोम्स। यसले अधिक संवेदनशील मानिसहरूमा दम पैदा गर्न सक्छ।
मा आँखा वा छाला यसले समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ। वास्तवमा, यी फ्लक्सहरू छालामा पछ्याउँछन् र तातो राम्रोसँग ट्रान्सफर गर्न सक्दछन्, जसले गर्दा जलाइएको छ।
फ्लक्स कहाँ किन्ने?
अन्तमा, यदि तपाईं फ्लक्स खरीद गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले यसलाई विशेष मूल्यवान् इलैक्ट्रॉनिक्स स्टोरहरूमा राम्रो मूल्यमा फेला पार्न सक्नुहुनेछ। यी हुन् केही सिफारिसहरू:
JBC पानी-आधारित फ्लक्स
पीसीबी, बीजीए र एसएमडीका लागि फ्लक्स हिलिटान्ड गैर-संक्षारक।
सिरिंज ढाँचामा लीड-फ्रि फ्लक्स।
रोजिन कोर (फ्लक्स) को साथ सिसा-रहित मिलापका लागि टिन तार।
सीरिज रिबलि forको लागि सीएस ल्याब फ्लक्स।
सिरिंजमा सफा (कुनै सफाइन) बिना फ्लक्स पेस्ट गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » सामान्य » फ्लक्स: कुन उत्पादनलाई वेल्डिंगमा प्रयोग गरिन्छ?
ओपनएक्सपो आभासी अनुभव २०२१: तपाईंले यसलाई याद गर्नु हुँदैन!